Kuonga BRUCE kudzoka kubva kuCambodia!
Post nguva: Zvita-21-2020
Nemamiriro ezvinhu akaipisisa edenda kumba nekune dzimwe nyika, kuitira kupedzisa kumisikidza uye kudzidziswa kweCambodian mutengi wehungwaru kiyi manejimendi manejimendi system. BRUCE, mainjiniya enjiniya anotarisira LANDWELL, akafunga kuenda kuCambodia kunogadzirisa dambudziko-rekutengesa kweJIN BE ...Verenga zvimwe »
China yekuchenjera kugadzira, uye hukuru budiriro! Mazana emak smart makabati makiyi ari kuenda kuTurkey
Post nguva: Dec-10-2020
Pakutanga kwegore rino, kamwe kamwe korona nyumoniya chirwere chakakonzera makambani mazhinji kuve mukuoma uye kunonoka kumutsiridza basa, izvo zvakadzora nhanho yekusimudzira magariro pamwe nehupfumi. Zve LANDWELL, kunyangwe zviome sei, inofanirwa kuita nhamburiko dzese kusimudzira R&D a ...Verenga zvimwe »
Sei kiyi yangu isingakwanise kuvhura kiyi?
Ndokumbira utarise kune iyo nzvimbo yakaratidzirwa nedenderedzwa dzvuku sezvakaratidzwa mumufananidzo. Idzi mbiri dzegrey dzinoda kutanga dzabviswa. Uye zvadaro screws dzinofanirwa kuvhurwa Panguva ino, iyo kiyi inogona kuvhurwa nyore nekiyi yako. Nei yakagadzirirwa seizvi? Kutanga o ...Verenga zvimwe »
Makuru Makuru Ekuchengetera Cabinet, Diki Bhokisi Management System Uye Kiyi, Inokiyiwa Key Kabineti, Iyo Bhokisi Yekudzivirira Kiyi, Yakarembera Kiyi Bhokisi, Key Management Cabinet,